कुखुराको अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी? जान्नुहोस् विज्ञानको तर्क – Nepal Journal
कुखुराको अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी? जान्नुहोस् विज्ञानको तर्क
Posted By: Nepal Journal December 1, 2017 | १५ मंसिर २०७४, शुक्रबार १६:४२
दुनियाँ यस्ता कयौँ प्रश्नहरु रहेका छन्, जुन हामी सानैदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ तर हालसम्म पनि यसको उत्तर प्राप्त गर्न सकिएको छैन । जस्तै पृथ्वीमा कुखुरा पहिला आयो वा अण्डा? त्यस्तै अण्डा शाकाहारी हो वा मांशाहारी?
कयौँ शाकाहारी मानिसहरुका अण्डा मांशाहारी हो भन्ने सोचेर खादैनन । कयौँ मानिसहरुको तर्क रहेको हुन्छ कि अण्डाबाट चल्ला बन्ने गर्दछ । त्यसैले अण्डा मांशाहारी हो ।
तर यसो हो भने दुध पनि जनावरबाट नै निस्कन्छ, तर यो कसरी शाकाहारी भन्ने तर्क रहेको पनि पाइन्छ । यदि अण्डाबाट चल्ला निस्कने कारणले नै याो मांशाहारी भन्ने लाग्छ भने बजारमा पाइने प्राय सबै अण्डा अनफर्टिलाइज्ड हुने गर्दछन् । यसको मतलब ती अण्डाबाट कहिल्यै पनि चल्ला निस्कदैनन ।
त्यसैले अण्डा शाकाहारी हो भन्ने तर्क बैज्ञानिकहरुले विज्ञान मार्फत नै दिएका छन् । अण्डाका पाइने सेतो भागमा केबल प्रोटिन रहेको हुन्छ । जसमा जनावरको कुनै पनि हिस्सा रहेको हुदैन । त्यसैले एग ह्वाइट शाकाहारी हुने गर्दछ ।
एग योक अर्थात् अण्डामा रहेको पहेलो भागमा सबैभन्दा धेरै प्रोटिन, कोलेस्टेल र फ्याट रहेको हुन्छ । तर कुखुरा र कुखुरी सम्पर्कमा आएपछि त्यसमा ग्यामिट सेल्स हुने गर्दछ । जसले उक्त अण्डालाई मांशाहारी बनाउने गर्दछ ।
तर बजारमा पाइने सबै अण्डाहरु अनफर्टिलाइज्ड हुने हुनाले अण्डा शाकाहारी हो भन्ने कुरामा वैज्ञानिकहरुले तर्क दिएका छन् । शाकाहारी कसैले पनि अण्डा मांशाहारी भन्ने सोचेर खान छोडेको छ भने त्यसलाई खान सुरु गर्नका लागि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
Be the first to comment on "कुखुराको अण्डा शाकाहारी कि मांशाहारी? जान्नुहोस् विज्ञानको तर्क"